ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်က ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်မပို့နိုင်သေးဟုဆို | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်က ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်မပို့နိုင်သေးဟုဆို
epa06386993 Nutrition biscuits are handed out to waiting Rohingya men from the back ofatruck in the Balukhali refugee camp near Cox's Bazar in Bangladesh, 12 December 2017 (issued 13 December 2017). More than 646,000 Rohingya refugees have crossed the border from Myanmar into Bangladesh, following the Myanmar army's August crackdown on Rohingya rebels in the state of Rakhine. EPA-EFE/TRACEY NEARMY AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်က ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်မပို့နိုင်သေးဟုဆို
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်က ဒုက္ခသည်တွေကို ဇန်န၀ါရီလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ပြန်မပို့နိုင်သေးဘူးလို့ ဘင်္ဂလားအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ပြောဆိုချက်ကို ကိုးကားပြီး ရိုက်တာသတင်းဌာနက ဖော်ပြလာပါတယ်။
EPA-EFE/TRACEY NEARMY AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
ပြန်လည်လက်ခံရေး စခန်းတွေ ဆောက်လုပ်ဖို့နဲ့ ဒုက္ခသည်အမည်စာရင်းတွေကို နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရတွေ တရားဝင် အတည်ပြုဖို့ ကျန်ရှိနေတာကြောင့် ပြန်မပို့နိုင်သေးတာဖြစ်တယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောဆိုထားတာပါ။
လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ မြန်မာအစိုးရက ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ၅၀၀ ကျော်နဲ့ မူစလင်ဘာသာဝင် ၇၅၀ ဦးတို့ရဲ့ အမည်စာရင်းတွေ ပေးပို့ထားပြီး မူလအစီအစဉ်အတိုင်း လက်ခံသွားမယ်လို့ ပြောဆိုထားတာပါ။
ဒါ့အပြင် ပြန်လည်လက်ခံမယ့်သူတွေကို ယာယီစခန်းတွေမှာ ထားမှာ မဟုတ်ပဲ မူလကျေးရွာတွေမှာ အမြန်ဆုံးအခြေချနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်း ပြောကြားထားပါတယ်။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ဘကျက ဒုက်ခသညျတှကေို ပွနျမပို့နိုငျသေးဟုဆို
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ဘကျက ဒုက်ခသညျတှကေို ဇနျနဝါရီလ ၂၃ ရကျနမှေ့ာ ပွနျမပို့နိုငျသေးဘူးလို့ ဘင်ျဂလားအစိုးရ တာဝနျရှိသူတှရေဲ့ ပွောဆိုခကျြကို ကိုးကားပွီး ရိုကျတာသတငျးဌာနက ဖျောပွလာပါတယျ။
ပွနျလညျလကျခံရေး စခနျးတှေ ဆောကျလုပျဖို့နဲ့ ဒုက်ခသညျအမညျစာရငျးတှကေို နှဈနိုငျငံ အစိုးရတှေ တရားဝငျ အတညျပွုဖို့ ကနျြရှိနတောကွောငျ့ ပွနျမပို့နိုငျသေးတာဖွဈတယျလို့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့အစိုးရ တာဝနျရှိသူတှကေ ပွောဆိုထားတာပါ။
လကျရှိအခွအေနမှောဆိုရငျတော့ မွနျမာအစိုးရက ဟိန်ဒူဘာသာဝငျ ၅၀ဝ ကြျောနဲ့ မူစလငျဘာသာဝငျ ၇၅၀ ဦးတို့ရဲ့ အမညျစာရငျးတှေ ပေးပို့ထားပွီး မူလအစီအစဉျအတိုငျး လကျခံသှားမယျလို့ ပွောဆိုထားတာပါ။
ဒါ့အပွငျ ပွနျလညျလကျခံမယျ့သူတှကေို ယာယီစခနျးတှမှော ထားမှာ မဟုတျပဲ မူလကြေးရှာတှမှော အမွနျဆုံးအခွခေနြိုငျအောငျ ပွငျဆငျထားတယျလို့လညျး ပွောကွားထားပါတယျ။ (တငျပွီး)
Previous articleရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းတွေ ဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့လဲ(ရုပ်/သံ)
Next articleဘင်္ဂါလီတွေ ပြန်လက်ခံရေး အစိုးရသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ်